Yusuf Garaad: Geerida Mascuud
Mascuud oo dhallinyarada da'diisa ah kuwa ugu dhaqdhaqaaqa iyo firfircoonida badan ka mid ahaa, xiriirro fara badan lahaa, Dowladdana u shaqeynayay, markii uu xanuunsaday ma helin cid u gurmata oo geysa isbitaal xaaladdiisa wax ka qaban kara. Bal qiyaas ninka ama gabadha isaga ku fac ah ee aan shaqeyn ee aan xiriirrada uu leeyahay oo kale aan lahayn.
Nasiibkaas waxa aad heleysaa oo keliya haddii adiga oo xiskaaga qaba aad u baahato Isbitaal. Dad badan waxaa go'aan loo gaaraa oo Isbitaal loola cararaa ayaga oo aan talada wax ku lahayn xaaladda ay galeen awgeed. Xataa dadka go'aanka u gaaraya waxaa laga yaabaa in aanay is aqoon maaddaama aad ku dhaawacmi karto ama aad xanuun dartiis ku miyir beeli karto waddada ama meel kale oo aan ahayn gurigaaga ama goobtaada shaqada ama waxbarashada.
Qofka xanuunsan ama dhaawaca ah hadduu yahay shaqaalaha Dowladda Isbitaallada guduhuna aanay wax ka qaban karin, maxay tahay mas’uuliyadda hey’adda uu ka tirsan yahay ka saaran in bukaankaas isbitaal dibadda ah la geeyo? Wakhti intee le'eg ayay tahay in hey'adda laga warsugo.
Waxay ila tahay in qormadeydu ay soo bandhigtay su'aalo ka badan kuwa ay ka jawaabtay. In aan isu kaashanno jawaabaha ayaan u baahan nahay.
Posted by Yusuf Garaad at 17:56:00